Ahoana ny fametrahana Lightread amin'ny Debian Wheezy | Avy amin'ny Linux
Ahoana ny fametrahana Lightread amin'ny Debian Wheezy
Christopher castro | | fampiharana
Tsara taorian'ny teny avy amin'ny namako bilaogera, nikasa ny hametraka aho Lightread en Debian Wheezy ary raha tsy afaka nanoratra ity lahatsoratra ity aho dia lazaiko aminao ny fomba hametrahana azy.
Fiankinan-doha sy LightRead Wheezy
Sintomy ny rakitra izay misy ny fiankinan-doha, esory ny zip, ampidiro ny terminal, mankanesa any amin'ny folder izay manana fiankinan-doha ary manorata.
Ity etsy ambony ity dia tsy maintsy atao miaraka amin'ny tombony amin'ny fitantanana, ka azo antoka fa mila apetraka eo aloha izy ireo: sudo
Afaka miditra dia mankanesa any Fampiharana >> Lightread
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Ahoana ny fametrahana Lightread amin'ny Debian Wheezy
Tsara !! Amin'izao fotoana izao dia manandrana milaza aminao aho .. 😀
Salama Elav. Azafady mba lazao amiko raha miasa ao amin'ny Xfce ity rindranasa ity. 😉
Tsy mbola nametraka azy aho 0_o
Azo antoka fa mandeha izy io, maninona no tsy tiako?
ary amin'ny Arch miaraka amin'ny 'yaourt -S lightread' dia azo apetraka ihany koa, nanamarina fotsiny aho
Efa nametraka azy aho… Mila milaza aho: tsara izany. Tsy isalasalana fa ny mpanjifa RSS tsara indrindra nozahako, ary raha mamoaka kinova Android izy ireo dia ho faly tokoa aho 🙂
PS: Mampiasa ny fitsapana ny Debian koa aho.
Misy mahalala ve raha hampiditra azy ireo dia ireo repo debian?
Ivan E. Garcia C. (@mxartesano) dia hoy izy:
Inona no endri-tsoratra ampiasainao amin'ny menus?
Valiny tamin'i Ivan E. Garcia C. (@mxartesano)
Fantatrao, satria hitako fa navoaka izy io dia nanandrana azy tao amin'ny Ubuntu aho, ary satria vao namolavola pc vaovao misy OS nalaina avy amin'ny Ubuntu aho dia nanapa-kevitra ny hizaha toetra an'io ary miasa, misaotra, zavatra lehibe ity mpamaky ity.
Andriamatoa Magoo dia hoy izy:
Sintomy ny fiankinan-doha ary havaozy miaraka amin'ny .deb binary izay eto
Mamaly an'Andriamatoa Magoo
Lahatsoratra tena tsara, ao amin'ny SolusOS aho ary ho mora ampiasaina ny Lightread, nampiasako izany tao amin'ny Ubuntu sy Mint fa tsy misy toa an'io ao amin'ny Solus malalako, manana +999999999 ianao
Cristian Vera dia hoy izy:
Tapaka ny rohy.
Valiny tamin'i Cristian Vera
Ny rohy tokana izay hita ao amin'ny lahatsoratra dia mandeha tsara. Nanamarina fotsiny aho. Angamba zavatra tsy naharitra izy io. Nanandrana indray aho.
Cairo Composite Manager: safidy iray hafa amin'ny Compiz sy Xcompmgr